Archives aMai 2021
Mashandisiro ekushandisa iyo Windows Package Manager kugadzirisa zvirongwa zvakaiswa kamwechete
Dai 31, 2021 by billy16
Microsoft yakaburitsa vhezheni yekutanga yekupedzisira ye Windows Package Manager chinguva chinguva chapfuura. Chirongwa ichi chinowedzera dzimwe sarudzo ku Windows kuisa, uninstall uye gadzirisa zvirongwa zvakaiswa pane ino sisitimu. Unogona kutarisa kubvunzurudzwa kwakabatanidzwa pamusoro kuti uwane zvimwe nezve base base mashandiro epakeji maneja Windows. Muchirongwa ichi, tichave tichitarisa tarisa pane iyo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Mashandisiro aungaita iyo Windows Package Manager kugadzirisa zvirongwa zvakaiswa kamwechete
Flash Game Archive inoita kuti iwe utambe zviuru zveFlash Games pane yako Windows PC
Flash haichazotsigirwi zviri pamutemo uye Adobe, Microsoft uye vabhurawuza vakaita seMozilla kana Google vakaremadza rutsigiro muzvigadzirwa zvavo. Ipo Flash isisiri mukusimudzira, ichiri musha kuzviuru zvemitambo nekushandisa, sezvo izvi zvisina kungoparara nekuguma kwekutsigirwa. Unogona kutamba Flash zvemukati mubrowser yako muna 2021, asi zvakare… [Verenga zvakawanda ...] nezve Flash Game Archive inoita kuti utambe zviuru zveMitambo yeFlash pane yako Windows PC
Manage Wireless Networks pa Windows neichi chitsva Nirsoft chishandiso
ManageWirelessNetworks chishandiso chitsva chemahara uye chinotakurika cheMicrosoft Windows zvishandiso maneja zvisina waya network (duh!). Iyo nyowani Nirsoft application inopihwa senge dura raunotora, kuburitsa uyezve kumhanya pane chakanangwa muchina. Iyo app inoratidza zvese zvinozivikanwa zvisina waya network profiles, kusanganisira aya awakamboshandisa kare asi hauchazoshandise mune ramangwana,… [Verenga zvakawanda ...] nezve Manage Wireless Networks on Windows neichi chitsva Nirsoft chishandiso
Maitiro ekudzima Microsoft Edge nyowani Startup Boost ficha
Inotevera Microsoft Edge yekuvandudza ichaunza chinhu chitsva chinonzi Startup Boost. Isu takaongorora chimiro ichi pazvakatangwa muMicrosoft Edge Canary kumashure muna Gumiguru 2020. Startup Boost ine chinangwa chekukasira kutanga kweMicrosoft Edge web browser pa Windows zvishandiso. Chaizvoizvo, zvinoitwa nechimiro iko kutakura musimboti weMicrosoft Edge maitiro kumashure pane… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekudzima Microsoft Edge's nyowani yekutanga Startost Boost
Samsung Galaxy Tab S8 mhuri inodonha nema specs nemitengo
Dai 31, 2021 by bartez64
Samsung yekumusoro-soro Galaxy S mafoni anouya ari matatu mazuva ano, uye zvinoita sekuti 2021 ndiro gore iro rinomirira hwendefa hwetafura richaratidzira iwo mafungiro. Sekureva kwekudonha kukuru kubva kuKorea, isu tinofanirwa kutarisira matatu maGalaxy Tab S8 zvigadzirwa gore rino - pamwe zvichitangisa pane imwe nguva munguva yezhizha. Vanilla Galaxy Tab S8 ine 11 "120Hz LCD yekubata skrini, ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Tab S8 yemhuri inodonhedza nema specs nemitengo
Enda kune peji 145